पार्टीको यस्तै आन्तरिक किचलो, आसन्न महाधिवेशन, नेपाल–भारत सम्बन्ध, कोभिड नियन्त्रणमा सरकारको भूमिकालगायत विषयमा शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग अखण्ड भण्डारी र रामकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
उहाँहरूले एजेन्डा भन्नुभयो, कर्णालीमा देखिएको समस्या। त्यो त्यत्रो ठूलो समस्या होइन। त्यो विषय उहाँहरूले जसरी मतिर सोझ्याउन खोजिरहनुभएको छ, त्यो निरर्थक छ। त्यहाँका सबै खालका मान्छेले मैले भनेको मान्ने कुरा आउँदैन। सबै खालका मान्छेले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यो उहाँहरूले जिम्मा नलिने, मैले जिम्मा लिने ? त्यसमाथि पार्टीमा समस्या भइरहेको छ भने कार्यकारी अध्यक्ष हुँ भन्ने मान्छेले हेर्नुपर्दैन ? त्यो थाहा पाएर मलाई भन्नुपर्दैन ? दर्ता भइसकेपछि उहाँले मलाई सूचना गर्नुभयो। उहाँको काम पार्टी सञ्चालन गर्ने होला, पार्टी हाँक्ने, मिलाउने होला। त्यो गर्नुपर्दैन ? मेरो टाउकोमा हाल्ने ? अरू विभिन्न ठाउँमा उहाँहरूले विभिन्न क्रियाकलाप गरेर, आपसमा घृणा पैदा गरेर, कार्यकर्ताबीच कुटपिट र मारामार लगाइरहनुभएको छ, जुन अत्यन्तै खेदजनक र दुःखद् हो। यस्ता क्रियाकलाप गर्नै हुँदैन।
बर्दिबासमा नेताहरूलाई कुटाउनुभयो अध्यक्ष र सचिवलाई। त्यहाँ मारामार नगरेर, भागेर छाड्दिनुपर्‍यो र जोगिनुभयो। भाटा तयार पारेर कार्यक्रम गर्न थाल्ने भनेपछि मनसाय के थियो ? त्यस्ता खालका काम पार्टीमा बन्द गरिनुपर्छ। कार्यकर्ताको ज्यानमाथि, कार्यकर्ताको लासमाथि आफ्नो स्वार्थ उमार्न खोज्ने ? हुर्काउन खोज्ने ? त्यो विल्कुल गलत र अनुचित हो। यस्तो काम कसैले गर्नुहुन्न। रोक्नुपर्छ।
जसले जतिखेर भन्यो त्यतिखेर बैठक बस्ने कुरा होइन। दुई अध्यक्षबीच सरसल्लाह हुन्छ, त्यसपछि महासचिवले बैठक बोलाउने हो। एजेन्डा, प्रस्ताव, कार्यसूची तयार पारेर, सम्भावित निष्कर्षसहित बैठक तोकिन्छ। कसैले बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै भन्यो भन्दैमा बैठक बस्छ र ? त्यसमाथि गुटगत बैठक बस्नु, झूटा रिपोर्टिङ गर्नु, गलत निष्कर्ष निकाल्नु, गलत दिशातिर राजनीति लैजान खोज्नु, पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न चाहनु उचित होइन। अझ कसैको अनुपस्थितिमा एकथरी मानिस बसेर कसैविरुद्ध कुराकानी गर्नु राम्रो हुँदैन।
महाधिवेशनसम्म यही प्रणालीमा जान्छ। किनभने, हामीले त्यो सहमति गरेका छौं। उहाँहरूलाई कतिबेला मन लाग्यो राजीनामा दिनुस् भन्ने ? उहाँहरूलाई चाहियो, भोक लाग्यो, तृष्णा जाग्यो भनेर छाड्ने कुरा हुँदैन। महाधिवेशनसम्म मैले लाने हो। महाधिवेशनले आफैं निर्णय गर्छ।
अहिले भेटघाट अस्वीकार गर्ने होइन। मोदीजीले जो प्रतिनिधि पठाउनुहुन्छ, त्यसैसँग कुराकानी हुन्छ। त्यो कुनै गैरकूटनीतिक हुँदैन। राजनीतिक अधिकार दिएर राजनीतिक कुराकानीका लागि पठाएपछि उहाँसँगै आधिकारिकता हुन्छ। अरूका प्रतिनिधि मैले छान्ने होइन। अर्काे कुरा, कुन प्रधानमन्त्रीले भेटघाट गरेको छैन ? भारत भ्रमणमा जाँदा कुन प्रधानमन्त्रीले भेटेको छैन ? उनी नेपाल आउँदा कुन प्रधानमन्त्रीले भेटेको छैन ? यत्ति हो, धेरैले यो गोप्य राखिदिनुस् है भन्छन्।
समयको बर्बाद हुन्छ। अनावश्यक ढंगले यो बैठक भनेको छ, भेटघाट भनेको छ, मैले किन भेट्न पाइनँ भनेको छ। निहुँ खोजेको छ। सरकारका काममा मैले समय पूरै दिनुपर्नेमा आधा समय अनावश्यक ढंगले खर्च गर्नुपरेको छ। लफडामा खर्च गर्नुपरेको छ। जवाफ दिनुपरेको छ। आज मैले तपाईंसँगको प्रश्नमा पनि देश विकासको कुराभन्दा अनावश्यक लफडाको जवाफ दिनुपरेको छ। यो मेरो रुचिको विषय होइन। अहिले वातावरण यस्तो बनाइएको छ कि विषयबाट ध्यान डाइभर्ट गरिदिएको, अन्यत्र मोडिदिएको छ। जसले गर्दा विषयतर्फ होइन, गैरविषयतर्फ, अनुचित विषयमा हामी समय बर्बाद गरिरहेका छौं।
साभार -- http://annapurnapost.com/news/169691
सत्तासीन नेकपाभित्र चर्कंदो घर झगडाले एकताको २६ महिनामै कतै पार्टी नै विभाजन त हुँदैन भन्ने आशंका व्याप्त छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले पार्टी विभाजन नहुने बताएका छन्। गत असार १० देखि सुरु भएको पार्टी स्थायी समितिमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत नेताहरूले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीको राजीनामा मागेपछि विवाद उत्कर्षमा…